နားခိုရာ: Wind of change?
အခုတလောမှာ အလုပ်ကိစ္စပြီးရင် အများဆုံး ပြောဖြစ်ကြတာကတော့ အခြေခံဥပဒေအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်အကြောင်းပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကြားမှာကို အယူအဆတွေက အမျိုးမျိုးပါ။
ကိုယ့်ဖဲကိုယ်ချိုး လိုရာဆွဲပြီးရေးထားတာကို ဘာလို့ထောက်ခံရမှာလဲ။ ထာဝရ နဖားကြိုးထိုးပြီး သားစဉ်မြေးဆက် အုပ်စိုးချင်တဲ့ အကြံစည်ပဲ... လက်ကို မခံနိုင်ဘူး ...... လို့ ဆိုတဲ့ သူတွေကလဲဆိုကြတယ်။
အိုကွယ် ... ဥပဒေက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ....ဆိုတဲ့အခြေအနေထက်တော့ ထပ်ဆိုးနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ရသလောက်လေးယူထား။ နောက်တော့ပြောင်းကြတာပေါ့။ ၁၀၀% စစ်အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်နေရာကနေ ဘာပဲပြောပြော ရွေးကောက်ပွဲကတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်လာမယ်လေ။ ၂၅%က သူတို့လိုရာလူထည့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါလေးအကြောင်းပြုလို့ စီးပွားရေးလေး ဦးမော့ပြီး လူတွေများ ချောင်လည်လာမလားပေါ့ဗျာ .... စသည်ဖြင့်ပြောတဲ့သူတွေကလည်း ပြောကြတာပေါ့။
တစ်ဦးချင်းဆီက ဘယ်လိုကန့်ကွက်တယ် ထောက်ခံတယ်ပြောနေပြောနေ တိုင်းပြည်နဲ့အ၀ှမ်း တကယ်တမ်း အချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ (Aggregrate Result) ကို ကျွန်တော်ပို စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ ဒီအခြေခံဥပဒေ အသက်ဝင်လာဖို့က မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူရဲ့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရမယ်လို့ဆိုထားတာကိုး။
ဒါဆိုရင် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက (စစ်သားတွေအပါအ၀င်) မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လဲ ?
ကြံ့ခိုင်ရေးကရော အင်အားဘယ်လာက်ရှိသလဲ။ သူလို့ အင်အားလို့ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေကရော တကယ့်အင်အားတွေဖြစ်ပါ့မလား?
ဘာပဲပြောပြော စက်တင်ဘာလ အဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်းမှာ ဘီဘီစီဘယ်လို ဘီအိုအေ ဘယ်ကဲ့သို့ ဆိုတဲ့စာတွေကိုင်ပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ (သူတို့မျက်နှာတွေက စိတ်မပါပါဘူး ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပါ ဘာညာ ပြောချင်တာပြော) သူတွေတွေကရော အခု ထောက်ခံမဲထည့်ဟေ့ဆိုရင် ထည့်ကြမှာလား။ အဲဒီလို လူတွေရဲ့ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ?
ရန်ကုန် မန္တလေး စတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့ လူဦးရေ (၁၈နှစ်အထက်ပေါ့ဗျာ) ဘယ်လောက်လဲ? ကျေးလက်ဒေသတွေရဲ့ လူဦးရေ?
လူဦးရေထဲမှာ လုပ်ငန်းရှင်၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အပြင်ဝန်ထမ်း၊ လယ်သမား၊ ကုန်သည်၊ လက်လုပ်လက်စား အစိုးရ၀န်ထမ်း ... စတဲ့ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ ဘယ်လို ပျံ့နှံနေသလဲ?
ဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကို ထောက်ခံကြတယ် ကန့်ကွက်ကြတယ် ... ဘယ်ဖက်က အလေးသာတယ်လို့မှန်းမလဲ? ကိုယ်က ကန့်ကွက်ချင်တဲ့သူဆိုရင် ဒါကြီးအသက်မ၀င်လာအောင် ဘာတွေလုပ်ပြီး တားဆီးမလဲ။ ထောက်ခံတဲ့သူဆိုရင်လဲ ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဖက်က ဘယ်လောက်အလေးသာလဲ ၅၀%ကျော်မဲရအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ .... အချိန်ကတော့ သိပ်မရတော့ဘူး။
ဘာပဲပြောပြော ဒီ ၂နှစ် ၃နှစ်အတွင်းမှာ စီးပွာရေးကတော့ ကျပြီးရင်းကျရင်းပါပဲ။ ကုမ္ပဏီတွေ ပြင်ပ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ကုန်သည်တွေအနေနဲ့ လှိုင်းလုံးတစ်လုံးကြောင့် လဲကျရာက ကုန်းထမလို့လုပ်တုန်း နောက် လှိုင်းလုံး တစ်လုံးက ဖင်ပိတ်ကန်တာ ခံရပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့လုံးချာလည်လိုက်နေကြတာ။
ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူး (တိုက်ဆိုင်နေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်) စက်တင်ဘာ အဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်စုနဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတယ်၊ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲနေပြီ စတဲ့သတင်းတွေနဲ့တင် စီးပွားရေးလေးက အတော်အတန်တည်ငြိမ်လို့ ပြန်လည်ဦးမော့လာချင်တဲ့ အရိပ်အရောင်လေးတွေ တွေ့နေရတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ တက်ရိပ်ပြမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတုန်းပဲ။
ဘယ်လမ်းပဲသွားသွား စီးပွားရေးလေး ဦးမော့လို့ လူတွေလူတန်းစေ့လေး နေနိုင်စားနိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြဖို့က ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပထမဦးတည်ချက်ပါပဲ။
Posted by little moon at 3:24 PM